आफ्नै रणनीति सरकारलाई भारी: विप्लवलाई फकाउने कि दबाउने ? अलमलमा सरकार ! – Kantipur Press
काठमाडौं : सरकार आफ्नै रणनीतिका कारण अफ्ठ्यारोमा परेको छ। यही विषयमा छलफल गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अधिकारसम्पन्न राजनीतिक वार्ता समितिका संयोजक सोमप्रसाद पाण्ड्येलाई मन्त्रालय बोलाएका छन्।
असन्तुष्ट राजनीतिक समूहको नजरबाट आफूमाथि हुनकै लागि सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको थियो। तर, वार्ता समितिको बेवास्ता गर्दै नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आफ्नो गतिविधि रोकेन। जसको कारण सरकार आफ्नै रणनीतिको धरापमा परेको छ ।
देशमा भएका सामान्य घटनामा पनि आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही कारण अहिलेसम्म औपचारिकरुपमा बोल्न सकेका छैनन्। त्यतिमात्र होइन, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पनि यी घटनामा आफ्नो आधिकारिक धारणा व्यक्त गर्न सकेको छैन।
आफूलाई गृहमन्त्री थापाले छलफल लागि बोलाएको संयोजक पाण्डेयले बताए। केही दिनदेखि राजधानी बाहिर रहेकाले आज काठमाडौं पुग्नेवित्तिकै गृहमन्त्रीलाई भटेर छलफल गर्ने उनले अन्नपूर्ण अनलाइनलाई जानकारी दिए। ‘गृहमन्त्रीसँग छलफल भएपछि मात्र अब के गर्ने भन्न सकिन्छ,’ संयोजक पाण्डेयले भने,’घटनामा हाम्रो आधिकारिक धारणा पनि त्यसपछि नै सार्वजनिक हुन्छ।’
गत भदौ ६ गते बसेकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्तारुढ नेकपाकै सांसद पाण्डेयको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुरुप समितिले सरकारबाट भूमिगत, अर्धभूमिगत, द्वन्द्वरत र असन्तुष्ट राजनीतिक दल तथा समूहसँग वार्ताको म्यान्डेट पायो।
संयोजक पाण्डेयका अनुसार समितिको पहिलो प्रथामिकतामा विप्लव नेतृत्वको पार्टीसँग वार्ता गर्नु थियो। तर, दोस्रो पटक थपिएको म्याद पनि पुस ११ गते सकियो। समितिले विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई वार्तामा ल्याउन सकेन। यो रणनीति असफल भएपछि अब कस्तो रणनीति अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ।
तोकेको म्याद सकिएपनि आफूले अनौपचारिक रुपमा वार्ता गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीबाट पाएको संयोजक पाण्डेय बताउँछन्। ‘अब हामीले विप्लवसँगै भेट्ने तयारी गरिरहेका छौं, त्यतिन्जेल सरकार उहाँहरुमाथि नरम रुपमा प्रस्तुत हुन्छ’, उनले भने।
यसअघि म्यान्डेट अनुरुप समितिले विप्लव नेतृत्वको पार्टीसँग पनि वार्ताको पहल गरिरहेको थियो। वार्ता गर्नकै लागि भनेर पक्राउ परेका नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लाई आफ्नो विशेष अनुरोधमा गृहमन्त्रालयले छोडेको समेत संयोजक पाण्डेयको दाबी छ। तर, वार्ता भइरहेका बेला देशभर विस्फोट विस्फोटका घटना भएका छन्। यी विस्फोटका घटनालाई नेकपाले जिम्मा लिइसकेको छ। विस्फोटमा एकजनाको मृत्यु र दुई जना घाइते भएका छन्।
सरकारले फसाउन खोज्यो
तर, विप्लव नेतृत्वको पार्टीले यस सरकारले समिति गठन गरेर आफूमाथि षड्यन्त्र गर्न लागेको आरोप लगाउँदै आएको छ। आफूलाई आफू प्रदेश-६ मा बसिरहेको बताउने विप्लव नेतृत्वको नेकपाका एक नेताले भने,’अब सरकारको राजनीतिक वार्ता समितिको केही काम छैन, त्यो समिति हामीलाई फकाउन होइन फसाउन बनाइएको हो, यो कुरा हामीले राम्ररी बुझेका छौं।’
प्रहरी प्रशासनले भने सरकारको नरम नीतिका कारण आफूले काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएको छ। ‘स्पष्ट निर्देशन नहुँदा प्रहरी अलमलमा छ, घटनापछि अनुसन्धान गर्ने र पक्राउ गर्नेबाहेक अन्य विकल्प छैन,’ प्रहरीका एक वरिष्ठ अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भनेका छन्। ती अधिकारीका अनुसार प्रहरीसँग विप्लव र उनका कार्यकर्ताको रेकर्ड छ। तर, सरकारले स्पष्ट निर्देशन नदिएका कारण पक्राउ गरी कारवाही गर्न सकिएको छैन।
शुक्रबार राति देशभर भएको श्रृखलावद्ध बम विस्फोटका कारण गृहमन्त्री रामबहादुर थापा त्रसित देखिएका छन्। सरकार यो घटनामा चुप रहेको अवस्थामा पनि गृहमन्त्री थापाले आफ्नो धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्।
गृहमन्त्री थापाले संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा विस्फोटको घटना विप्लव समूहले गराएको दावी गरे। ‘प्रारम्भिक सूचनाअनुसार बिस्फोटमा विप्लवको समूह संलग्न देखिन्छ’ थापाले भने,’यस्ता समूहको प्रतिरोध गर्न सरकार अब ठोस सुरक्षा योजना बनाएर अघि बढ्छ।’
यसअघि घटनाको भोलिपल्ट विहानै घाइते तथा मृतकका परिवारलाई भेटेर क्षतिपूर्ति तथा उपचार खर्चको उपलब्ध गराउने घोषणा गरिरहेका छन्।